May Nyane: မြသီလာအလွမ်းပြေ(၁၀)
ပျော်လိုက်တာဆရာမရေ..ဒီနေ့ ၂ ပုဒ်တောင်တင်တယ်ပေါ့..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ့တုန်းက ဖောက်ထွက်တာကို ဆရာတိုင်း လက်မခံသေးပေမယ့် ဆရာကောင်းတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်နော်။ အခုတော့ ....း-(
အလျဉ်းသင့်ရင် ဆရာမောင်သာချိုအကြောင်းလည်း ရေးပေးပါ ဆရာမ။
မြန်မာစာကို တကယ်ဝါသနာပါလို့ အထူးပြုယူပြီး ထူးထူးချွန်ချွန် လေ့လာခဲ့ပြီးမှ၊ ဖောက်ထွက်တွေးခဲ့မိလို့ ၊ မဟာဝိဇ္ဖာနဲ့ ဝေးသွားတဲ့မဟာတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့ပြီလဲမသိ်..
မြသီလာ အလွမ်းပြေက အရှိန်တက်လာသလို တကယ် လေးနက်လာပြီ
(၁) ကျနော်တို့လက်ထက်မှာလည်း ပါချုပ်ဟာ ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေကို ဦးခင်ညွန့်က ကြံ့ဖွတ်ထဲ အကုန် ဝင်စေ ပြောတော့ ဆရာကြီးက ကျောင်းတွေ ဆန္ဒအလျောက် ဝင်ပါစေလို့ ကာကွယ်မိလို့ ဆရာကြီးဟာ အငြိမ်းစားပေးခံရပါတယ်။
(၂) အစ်မရေ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဆရာ/ဆရာမ ပေါက်စတွေကို မလေးစားရခြင်းကို ခြေခြေမြစ်မြစ် ကျနော် လေ့လာဖူးတယ်။ အဲဒါကို ပို့စ်ရေးချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာကို။ ခေတ် စနစ်က လူငယ်တွေကို ရိုင်းလာစေခဲ့ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက အထင်အမြင် လွဲမှားလာစေပါတယ်။ (ရှေ့နေလိုက်ရန် မဟုတ်ပါခင်ဗျာ)
(၃) အလွန်တရာ ရုပ်ဆိုးတဲ့ Rape ကေ့စ်ဟာ ဂျီအိုလိုဂျီမှာ ဖြစ်သွားတာတော့ မှတ်မိပါတယ်။ သေသေချာချာ သိခွင့်မရပါ။
(၄) အဲဒီခေတ်က ချဲခဲ့လို့လား မသိဘူး။ ကျနော်တို့ခေတ်မှာ ကားသမားတွေဟာ ကျောင်းသားကို သိပ်အလိုလိုက်ပါတယ်။ ယာဉ်ထိန်းရဲဖမ်းရင်တောင် ကျောင်းသာတွေကြောင့်ပါလို့ ပြောရင် ရဲက လန့်တဲ့ အခြေအနေပါ။ (ခုတော့ မသိ)
(၃) ဆရာဇော်ဇော်အောင်က ခုထိ မော်ဒန်ကဗျာသမားပေါက်စတွေကို တိတ်တဆိတ် လွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ သူရေးတဲ့ နောက်ပိုင်း စာအုပ်တွေဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ဖတ်စာအုပ်ပဲ။
(၄) ရှေး ဆရာ ဆရာမကြီးတွေ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲခြင်းဟာ ခုထိရှိနေဆဲပါ။ ခေတ်သစ် စီးပွားရေးဝါဒကို ထည့်သွင့်ရေးထည့်ပြီး ခေတ်ဟောင်းကို ဝေဖန်မိလို့ First Role နဲ့ ပြည်ပ ပညာသင်ဆုရသူဟာ အားလုံးအံ့သြလောက်အောင် စာမေးပွဲ အချခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ၂၀၀၅ မှာပါ။
ဆရာမတို့လို သိတဲ့လူတွေက ကျောင်းရဲ့ လွမ်းမောစရာလဲ ရေး၊ ချစ်စရာကောင်းတာလဲ ရေး၊ ပညာတတ်တွေရဲ့ ပညာပြမှုတွေ၊ ဘက်လိုက်မှုတွေလဲ ရေး ဆိုတော့ မြသီလာကို အလျားလိုက် ဖြတ်ကြည့်ရသလိုပါပဲ။ ပိုဖတ်ကောင်းလာပြီ။
လိမ်မော်ချိန် Sai Hhi Saing's ?. Oh yes, I did enjoy it.
Sin da lar..
အချိန်ရတိုင်း ရေးတင်သွားပါ့မယ်။ အဲလို အားပေးတဲ့သူတွေကြောင့်။
ဟုတ်တယ်..ကောင်းကင်ကို.. အမ ဆက်ရေးဦးမှာပါ.. ခု..ဘယ်လောက်ဆိုးသွားပြီလဲဆိုတာကို :(
ကမောင်ရင်ရေ.. တကယ့်ကိုပဲ အဲလိုအဝေးရောက်သွားတဲ့ မဟာတွေ.. အများကြီး။ တော်လို့ရယ်.. ဆင်းရဲလို့ရယ်.. မှန်လို့ရယ်..။ အမမှာ အချက်အလက်တွေအများကြီး.. ဒါပေမဲ့ ကာယကံရှင် မဟုတ်လို့..ရေးမရ။ သိပ်နှမျောစရာကောင်းတာပါ။
သင်ကာရေ.. ရေးသင့်တယ်..။ ကျောင်းသား ဆိုဒ်က..။ အမလည်း ရေးဦးမှာပါ..။အမှန်တရားက နည်းနည်းတော့ ခါးတာပေါ့ဟယ်..နော။
ချိုသင်းရေ.. တကယ်တမ်းတော့ ဆက်ရေးရတာကို စိတ်ထိခိုက်လာပြီ။ ဘာလို့ဆို ၈၈ နဲ့ နီးလာပြီလေ။
steve .. ဟုတ်ပါတယ်။ စိုင်းထီးဆိုင်နဲ့ စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ လိမ်မော်ချိန်ပါ။
၀တ္ထုတို ၇၂ ပုဒ်... ယုဇနမခင်ပျိုလည်းပါတယ်။
မ ရေ… မြသီလာက အတော်အရှိန်တက်လာပြီ…
ကျွန်မမေမေအလယ်တန်းပြဆရာမလဲ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဆရာ၊တပည့် ဆက်ဆံရေးကို မခံစားနိုင်လို့ပင်စင်အသက်မရောက်ခင် အလုပ်ထွက်ခဲ့တယ် မ ရေ…
၄၅ကား အကြောင်းလေးဖတ်ရတော့ ကြက်သီးတောင်ထတဲ့အထိ ကြည်နူးမိတယ် မ ရယ်…
" ဆရာမကြီးရဲ့ နောက်ပိုင်း မော်ကွန်းထိန်းတွေကိုဆို သိပ်တောင် မှတ်မှတ်ထင်ထင် မရှိတော့တဲ့ အထိပါပဲ "
လေးဆိုတာတစ်ခုပါဘဲ။ အဆက်ဆပ်သော မော်ကွန်းထိန်း
တိုင်းကောင်းပါတယ်။ လူတိုင်းမှာပြည့်ဝတယ် ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိ ဘူးဆိုတာလက်ခံရင်ပေါ့။
ဒေါ်စိန်စိန် အကြောင်းမပြောလို့ မှတ်ချက်ရေးတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကျောင်းအကြောင်းကို ရေးရင်တော့ မော်ကွန်းထိန်းတွေရဲ့ အကြောင်းမပါရင် မပြီးဘူးလို့ မြင်ထားလို့ ပါ။
မနော်ရေ.. ဆရာဇော်ကို သိပ်လွမ်းတယ်..။ စာမရေးချင်တော့တာ နှမျောစရာပဲ..ဆရာ့မှာ အများကြီးကျန်သေးတယ်.. မထုတ်ရသေးတဲ့ အနှစ်တွေ။
ဟုတ်တယ်တန်ခူးရယ်.. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရှေ့ဆက်ရေးရမှာတောင် ကြောက်လာပြီ။ ရင်နာစရာတွေများလာတော့မှာလေ။
ဒီးဒီးရှင့်.. ဒေါ်စိန်စိန်တော်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျောင်းသူပါ..။ ဒေါ်စိန်စိန်နဲ့ တိုက်ရိုက် မထိတွေ့ဖူးပါ။ ဒေါ်သိန်းကတော့ ထိတွေ့ဖူးတာပါ။ ဒေါ်စိန်စိန်က ဒေါ်သိန်းထက်အရင်လို့ ထင်ပါတယ်။
Ko De De or Ma De De or whoever
If you want to read detail about Rangoon University or Hlaing Campus, Pls go to National library. We are here to read about the personal life of MayNyane. I don't care about Daw Sein Sein or Ko Sein Sein. I believe that MayNyane try to sketch the story of what she remembered.
If you want us to know who or where exactly, go and write your own blog.
ဆရာမရေ ကျောင်းအကြောင်းတွေ လာလာဖတ်ပြီး အလွမ်းမပြေဘဲ လွမ်းလွမ်းပြီးပြန်သွားရတယ်။